Asa ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Korea ho an'ny Isan-Tanàna - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Asa ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Korea ho an'ny Isan-Tanàna
Lalàna Hentitra ny topy maso Hwang Wolof Park, P
Asa ny lalàna mitantana ny zo sy ny andraikiny eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasaKoa dia antsoina hoe ny asa lalàna, ireo fitsipika dia voalohany indrindra natao mba hiaro ireo mpiasa soa aman-tsara, ary ho azo antoka izy ireo dia raisina amim-pahamarinana, na dia nilaza aza ny lalàna ao an-toerana mba hiarovana ny mpampiasa' zavatra mahaliana ihany koa. Lalànan'ny asa dia mifototra amin'ny fitondrana federaly sy ny fanjakana lalàmpanorenana, lalàna, ara-panjakana ny lalàna, ary ny fitsarana ny heviny. Manokana ny asa fifandraisana mety ihany koa ho fehezin'ny fifanarahana.
AngukLaw Anjara fanompoana (ANGUK) dia ny fanompoana manontolo lalàna birao any Seoul, Korea ary manome isan-karazany ny ara-dalàna ny asa. Fampiharana faritra ahitana ny fifindra-monina, ny jeneraly ny orinasa, orinasa ara-bola, hetra, fitantanan-draharaha, bankirompitra, fandaminana indray sy ny fanavaozan-drafitra, ny fiombonana sy ny acquisitions. Lalàna Hentitra ny Lalànan'ny Birao dia feno fanompoana ny lalàna office afaka manazava malalaka spectrum ny raharaha ara-pitsarana izay zava-tsarotra ny ankamaroan'ny orinasa ankehitriny. Satria ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ny fitakiana ny ara-dalàna ny asa mifanaraka araka ny zavatra ilainy manokana ny toe-javatra tsy manam-paharoa, Ahnse dia natokana tao. Lalàna Hentitra ny topy maso Toy ny ampahany amin'ny fampidirana ny tambajotra, McDermott ny Seoul birao manome torohevitra sy stratejika ny fitarihana ny orinasa orinasa ny mivoaka ny asa ara-barotra, miaraka amin'ny fanamafisana ny orinasa varotra (fiombonana acquisitions), ny fananana ara-tsaina, - pitsarana. Lalàna Hentitra ny topy maso Baker McKenzie ny birao ao Seoul nisokatra tamin'ny volana Mey, ny fanamafisana orina ny Mafy ny fitantarana ao Azia-Pasifika koa maneran-tany, ary mampiseho ny nanohy fanitarana ho avo-fitomboana tsena. Ny birao ao Seoul dia Mafy ny rd birao maneran-tany sy ny faha- birao ao Azia-Pasifika.
Lalàna Hentitra ny topy maso Nisokatra tamin'ny ho toy ny vahiny tsy ara-dalàna ny birao mpanolo-tsaina, Cleary Gottlieb ao Seoul ny birao dia maneho ny hatry ny ela ny fandraisana sy ny fanoloran-tena ho an'i Korea.
Tato anatin'ny roa taona, ny Korea fanao nitombo mba ho lasa mpitarika ny fomba fanao iraisam-pirenena nandrakotra Korea. Lalàna Hentitra ny topy maso Simpson Thacher Bartlett LLP manome voarindra ara-dalàna ny toro-hevitra sy ny fanehoana ny sasantsasany amin'ireo lehibe indrindra sy tena sarotra transactional-pitsarana sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ny birao foibe any New York ny asa amin'ny voizin'olon-droa amin ny anjara fanompoana ao Beijing i Hong Kong, Londres, Los. Lalàna Hentitra ny topy maso Amin'ny efa ho telo-polo taona ny traikefa sy ny fahaizana amin'ny roa ao an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena fanao, Lee Ko dia tena hajaina ny mpitarika sy nametraka ny anarany ao Korea amin'ny fanomezana tanteraka isan-karazany ny ara-dalàna sy consulting services ho an'ny eto an-toerana sy iraisam-pirenena ny raharaha. (HMP) dia mirehareha ny tsy nihanahana, ka hatry ny ela ny fanoloran-tena ho mpitarika ny indostria ara-dalàna. Ao unremitting fikatsahana vahaolana sy ny raharaham-barotra ara-dalàna tsara, HMP efa lohalaharana eo amin'ny mamaly ny fanovana ilain'ny mpanjifa manao raharaham-barotra ao.
Lalàna Hentitra ny topy maso Amin'ny ekipa ny efa-polo mpisolo vava sy ny mpiasa, HwaHyun (fantatra ihany koa amin'ny maha-Jung Sohn) manome paikady sy azo antoka ara-dalàna ny tolotra ao Korea manokana ao amin'ny Orinasa ny Fampiharana, ny Fananana ara-Tsaina ny Teknolojia, ary ny Fifandirana fanapahan-Kevitra.
Seum naorina tamin'ny alalan'ny mpisolovava avy any ambony ao Korea lalàna orinasa mba hanome kalitao ambony ara-dalàna ny vahaolana tsara kokoa, haingana kokoa ary mahomby kokoa. Isika mahatakatra izay ny manan-danja mba nanolotra ny asa tsara indrindra dia ny mahafantatra ny mpanjifa ary hahafantatra fa izy ireo dia mitady toro-hevitra, tolo-kevitra, ny vahaolana. Herbert Smith Freehills dia iray amin'ireo izao tontolo izao ny mitarika asa matihanina raharaham-barotra, miara-mitondra ny olona tsara indrindra manerana ny roa-polo amby enin-birao, mba hihaona daholo ny ara-dalàna ny asa filàna eran-tany. Dia afaka manampy anao hahatakatra ny fahafahana raha ny fitantanana ny loza. Mpisolovava amin'ny Ezer manome avo lenta professional ara-dalàna ny asa ho mitombina ara-dalàna ny saram. Manao izay vitantsika isika mba hiarovana ny mpanjifa' zavatra mahaliana, nanome, na izany aza, fa nataony fanamafisana ny marina sy ny rariny. Ny lalàna Office Yesohn tolotra ara-dalàna ny asa ho an'ireo mpiasa mpifindra monina, ireo mpifindra monina, ny mpitsoa-ponenana mpiadina, multi-kolontsaina ny fianakaviana sy ny avy any ivelany ny mponina any Korea. Ny fivoriana voalohany dia maimaim-poana. Isika miteny anglisy, Urdu, Hindi, Farsi, ny teny frantsay sy ny teny koreana. Aoka isika hihaino anao.
Isika dia ho feo.
K L Vavahady LLP maneho mitarika ny global orinasa, ny fivoarana sy ny afovoany-tsena ny orinasa, ny renivohitra-tsena ireo mpandray anjara, sy ny mpandraharaha eo isaky ny orinasa lehibe vondrona toy izany koa ny vahoaka sehatry ny fikambanana, ny toeram-panabeazana, fikambanana mpanao asa soa sy ny olona. Ny fomba fanao dia robustly iray.
DLA Piper nanjary iray amin'ireo lehibe indrindra ny ara-dalàna mpanome tolotra ao izao tontolo izao tamin'ny taona ny alalan ny fiombonana tsy tafiditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna.
Raha lehibe amin'ny ambaratonga, ny fiombonana ny paikady dia tsotra - mba hamoronana fikambanana iraisam-pirenena ny fomba fanao ara-dalàna mahavita mikarakara ny manan-danja indrindra ara-dalàna ny zavatra ilain'ny.
Tady Fotsy, mpitarika ny global lalàna mafy, manana tantara lavabe amin'ny fanompoana be pitsiny mpanjifa raha-dalam-pandrosoana miavaka ny mpisolovava. Izany lova izany dia vokatry ny fiaraha-miasa na eo amin'ny vava sy ny mpanjifa ary eo ny mpisolovava - ary izany no mahatonga ny mafy amin'ny tena manokana toerana ho an'ny mpanjifa. LIO Mpiara-miasa dia mavitrika koreana lalàna mafy ny fanomezana feno ara-dalàna ny asa iraisam-pirenena sy ny mpanjifa eto an-toerana, amin'ny specializations amin'ny fahasalamana ara-dalàna, ara-pitsarana, sy ny orinasa varotra.
Izany no fototry ny lanjan'ny fahatokiana, ny hatsaram-panahy, fiaraha-miasa sy ny fahamarinana izay efa nitombo ny fahefana nandritra ny dimy amby roapolo taona mamorona vaovao ara-kolontsaina.
Izany fototra ny sanda dia mitovy amin'ny efatra sarety fa hifindra ny mpikambana ao amin'ny lalàna mafy ny Ranomasina Sisiny. Isika dia manohy mandray anjara amin'ny fanatanterahana. DR ATIDOHA no iray amin'ireo Korea folo lehibe indrindra amin'ny lalàna orinasa mihoatra ny an-jatony ireo mpisolovava sy mitohy, mba hanitatra ny tambajotra ny sampana birao amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona misy azy amin'ny an-tampony ny lalàna orinasa any ivelany. Tamin'ny volana janoary, Atidoha ny Lalàna Iraisam-pirenena Group, orinasa lalàna mafy izay naorina tamin'ny taona natambatra. Bae, Kim Lee no iray amin'ny lehibe indrindra, ary lava indrindra nanorina ny fomba fanao iraisam-pirenena any Korea. Izany dia ekena ho toy ny iray amin'ireo ambony fanompoana manontolo lalàna orinasa sy ny mpisava lalana ao amin'ny lalàna hentitra ny fitantanana ny tany Korea. Ela no heverina ho ny firenena azo iadian-kevitra aloha mpitarika pitsarana sy ny mpanelanelana, ny mafy manana. Aram ny Lalàna Iraisam-pirenena Birao dia feno fanompoana lalàna mafy ao Seoul, Korea, miaraka amin'ny fampiharana emphases ao amin'ny faritra ny raharaham-barotra iraisam-pirenena, orinasa, ny banky fitantanam-bola, ny hetra, ny fari-dranomasina shipping, vaovao ny serasera, sahy, antitrust sy ny fananana ara-tsaina ny lalàna.
Ny lenta ny mafy ¡s.
Ny Fianakaviana Fifandirana Fanelanelanana Lalàna - Manaiky Ny Baiko Ny Fianakaviana Mpisolovava Melbourne
Кореја суд правила неверна брачните другари не можат да датотеката развод тужби - Korea Times